China 8.0W / mk yakakwira kudziya kwekupisa MCPCB yeMagetsi torch vagadziri uye vanotengesa | Kangna
8.0W / mk yakakwira yekupisa conduction MCPCB yeMagetsi torch
Mhando yesimbi: Aluminium base
Nhamba yematanho: 1
Pamusoro: Tungamira mahara HASL
Plate ukobvu: 1.5mm
Kukora kwemhangura: 35um
Thermal Kuitisa: 8W / mk
Thermal kuramba: 0.015 ℃ / W.
MCPCB ndiko kupfupiswa kweMetal core PCBs, kusanganisira aluminium based PCB, mhangura yakavakirwa pcb uye iron based PCB.
Aluminium based board ndiyo yakajairika mhando. Izvo zvinhu zvepasi zvine aruminiyamu musimboti, yakajairwa FR4 nemhangura. Iyo inoratidzira yakashongedzwa yakapfekedzwa nhete iyo inobvisa kupisa munzira inoshanda kwazvo ichitonhora zvinhu. Parizvino, Aluminium Yakavakirwa pcb inoonekwa senge mhinduro yesimba simba. Aluminium yakavakirwa bhodhi inogona kutsiva zvisingaoneki zvedongo yakavakirwa bhodhi, uye aluminium inopa simba uye kugadzikana kune chigadzirwa icho ceramic zvigadziko zvisingakwanise.
Mhangura substrate ndeimwe yenzvimbo dzinodhura simbi substrates, uye ayo kudziya conductivity yakawanda nguva iri nani pane iyo yealuminium substrates uye esimbi substrates. Iyo inokodzera yepamusorosoro zvinobudirira kupisa kupisa kweakakwira frequency maseketi, zvikamu mumatunhu zvine musiyano mukuru mukukwirira uye kwakadzika tembiricha uye nemazvo ekutaurirana michina.
Thermal kuputira dura ndeimwe yemativi epakati emhangura substrate, saka ukobvu hwemhangura foil hwanyanya 35 m-280 m, iyo inogona kuwana yakasimba yazvino-inotakura kugona. Inofananidzwa nealuminium substrate, substrate yemhangura inogona kuwana zvirinani kupisa kupisa kupisa, kuti ive nechokwadi chekugadzikana kwechigadzirwa.
Maumbirwo eAluminium PCB
Dunhu Mhangura Rukoko
Iyo wedunhu mhangura dura inovandudzwa uye yakagadzirirwa kuita dunhu rakadhindwa, iyo aluminium substrate inogona kutakura yakakwira yazvino kupfuura yakafanana gobvu FR-4 uye yakafanana trace upamhi.
Iyo insulating dura ndiyo yepakati tekinoroji yealuminium substrate, iyo inonyanya kutamba mabasa ekuputira uye kupisa conduction. Iyo aruminiyamu substrate inodzivirira nhete ndiyo hombe yekupisa yekudzivirira mune yemagetsi module mamiriro. Izvo zvirinani iko kudziya kwekupisa kweiyo inodzivirira nhete, zvakanyanya kunyatsoita ndeyekuparadzira kupisa kunoitwa panguva yekushandisa kwechigadzirwa, uye kudzikisa tembiricha yechigadzirwa,
Nderupi rwesimbi ratichasarudza seyakavhara simbi substrate?
Isu tinofanirwa kufunga nezvekuwedzera kwekuwedzera kwekushisa, kupisa kwekushisa, simba, kuomarara, huremu, mamiriro epasi uye mutengo wesimbi substrate.
Kazhinji, aluminium inodhura zvakadhura pane mhangura. Inowanikwa aruminiyamu zvinhu zviri 6061, 5052, 1060 zvichingodaro. Kana paine zvakakwirira zvinodiwa zvekupisa kudziya, mechina zvivakwa, zvemagetsi zvivakwa uye zvimwe zvakakosha zvimiro, mahwendefa emhangura, mahwendefa esimbi isina waya, mahwendefa esimbi uye mahwendefa esimbi yesilicon anogona zvakare kushandiswa.
Kushandiswa kwe MCPCB
1. Audio: Input, goho gudzazwi, zvine mwero gudzazwi, odhiyo gudzazwi, simba gudzazwi.
2. Simba Rinopa: Kuchinja mutongi, DC / AC converter, SW regulator, nezvimwe.
3.Motokari: Yemagetsi regulator, kuvesa, simba rekupa magetsi, nezvimwe.
4.Computer: CPU board, floppy disk drive, magetsi ekushandisa, nezvimwe.
5. MaModule Emagetsi: Inverter, solid-state relays, inogadzirisa mabhiriji.
6. Mwenje nemwenje: mwenje-inochengetedza magetsi, akasiyana siyana emagetsi-anoponesa mwenje mwenje, mwenje wekunze, mwenje wepanzvimbo, mwenje wechitubu
8W / mK yakakwira tembiricha conduction aluminium yakavakirwa pcb
Ukobvu hwemhangura: 35um
Thermal nemishonga: 0.015 ℃ / W
Mhando yesimbi: Aluminium hwaro
Nhamba yematanho: 2
Maitiro erudzi: Thermoelectric kupatsanura mhangura substrate
Design pfungwa: Yakatwasuka simbi nhungamiro, mhangura block nzvimbo yekubatana yakakura, uye wiring idiki.
Pashure: 1.6mm inokurumidza prototype yakajairwa FR4 PCB
Zvadaro: Mutete Polyimide bendable FPC pamwe FR4 stiffener